Luka 17 NA-TWI - Bɔne, gyidi ne asɛde - Da bi Yesu ka - Bible Gateway
Luka 17 Nkwa Asem (NA-TWI)
17 Da bi Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Ɛyɛ dɛn ara a sɔhwɛ a ɛde onipa kɔ bɔne mu no bɛba, nanso onipa a ɛnam no so bɛba no, onnue. 2 Eye ma saa onipa no sɛ wɔde ɔbo a emu yɛ duru bi bɛsɛn ne kɔn mu atow no akyene po mu sen sɛ ɔbɛto nkumaa yi mu baako hintidua ama wayɛ bɔne. 3 Enti monhwɛ mo ho so yiye. Sɛ wo nua fom wo a, ka n’anim na sɛ onu ne ho a, fa ne bɔne kyɛ no. 4 Sɛ nso ɔfom wo mpɛn ason da koro na mpɛn dodow a ɔfom wo no nyinaa, ɔde ahonu srɛ wo a, fa kyɛ no.”